Isbaarooyin layaab leh oo kusoo kordhay Shabeellaha Hoose! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Isbaarooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka gudbay gaadiidka, waxaana haataan bilaabatay in wadada lagu joojiyo geela safarka ah oo loo iibgeeyo Suuqa Xoolaha Siinka Dheer ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Ceelasha Biyaha.
Dad xoolaha u iibgeeya Suuqa Geela Siinka Dheer iyo ganacsatada ayaa ka cabanaya isbaarooyin loo dhigtay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, kuwaasoo geela u socda suuqa looga qaado lacago baad ah.
Maxamed oo ka mid ah dadka ganacsatada xoolaha geeya Suuqa geela ee Siinka Dheer ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore isbaaro taalla meel ku dhow buundada Afgooye neef kasta oo geel ah looga qaadi jiray lacag dhan 50,000 oo shilin Soomaali ah, haatana ay soo kordheen isbaarooyin kale oo lacago ka raba.
Wuxuu sheegay Maxamed in labo maalmood ka hor isbaaro taalla degmada Daafeed ay ganacsatada geela u qeybisay warqado ogeysiis ah, kuwaasoo ay ku sheegayaan iney u diyaar garoobaan lacago baad ah oo laga rabo marka ay jidka soo marayaan, haddii kale aysan wadadaas marsiin xoolahooda.
“Markii hore waxaan dhibaato ku qabnay isbaaro taallay agagaarka buunadada Afgooye oo naga qaadi jirtay calaa neef geel ah 50,000 oo shilin Soomaali ah, waxaana kuwaas ku dayday qolo kale oo isbaaro u taallo Daafeed, kuwaasoo warqado ogeysiis na siiyey” ayuu yiri ganacsadahan geela ku iibiya Suuqa Siinka Dheer.
Ganacstada ayaa qaba in dhibaatada lagu hayo ay bilowday Isbaarada taalla Afgooye, taasoo markii ay muddo baadeysay geela safarka ay ogaadeen isbaarooyin kale, taasina sababtay iney iyaguna lacago baad ah dalbadaan.
Waxey sidoo kale ka cabsi qabaan ganacsatada oo xoolaha ka keena gobollada Koonfureed sida Baay, Bakool iyo Gedo iney sii bataan isbaarada loo dhiganayo geela safarka, maadaama jidkaani ku furmay.
Ganacsatada ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday iney wax ka qabato dhibaatooyinka lagu hayo ee sida gaadiidkii geela ay wataan wadada loogu joojinayo ee la weydiinayo lacago baad ah.
Isbaarada loo dhiganayo geela safarka ah ayaa ah mid ku cusub dalka Soomaaliya, iyadoo 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo isbaarooyinku intaan ka badnaayeen aan dalka lagu arkin. Mareeg Media